Archive du 20190822
Depiote TIM “Tsy hiray tsikombakomba amin’ny ratsy izahay”
Taorian’ny fivoriana niarahanay tamin’ny Birao politikan’ny TIM, dia nanapa-kevitra izahay Vondrona Parlemantera TIM,
Lahadinika tamin’ny fivoriambe teny amin’ny antenimieram-pirenena omaly ny volavolan-dalàna mifehy ny fanoherana, izay tsy natrehin’ireo depiote mpanohitra dia ny TIM.
Masy Goulamaly “Ilaina ny antoko mpanohitra”
Raha te hiaina ny demokrasia isika eto Madagasikara dia tokony hisy ny mpanohitra ao amin`ny antenimieram-pirenena. Nitondra ny heviny i Masy Goulamaly,
Baleke Mbete-Kgositsile “Mila henoina ny hevitry ny rehetra raha te handroso”
Natokana ho iray volan’ny vehivavy ny volana aogositra any Afrika Atsimo ka hisian’ny hetsika samihafa anehoana fa manana anjara toerana lehibe amin’ny fiarahamonina sy ny firenena ny vehivavy.
Jeannot Randrianaina Kandidà ben’ny tanàna ao Mahitsy
Nilaza ny fahavononany amin’ny filatsahan-kofidiana ho ben’ny tanàna ao Mahitsy, atoa Jeannot Randrianaina.
Depiote Randrianasolo Jean Nicolas Hampatsiahy ireo velirano mba hivadika ho asa tokoa
Ny filoha lefitry ny anteminieram-pirenena Malagasy Faritany Toliara, Jean Jacques Rabenirina, notronin'ny solombavambahoakan’i Madagasikara
Oniversiten’Antananarivo Hiara-kiasa amin’ny oniversiten’i Kyoto any Japon
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ny oniversiten’Antananarivo sy ny oniversiten’i Kyoto any Japon.
Fitrandrahana volamena antsokosoko Sinoa 9 voasambotra ny polisy
Efa noraisin’ny mpitandro filaminana mikasika ny harena ankibon’ny tany na ny “police des mines” faritanin’i Toliara ny tohin’ny raharaha mahakasika ireo sinoa roa vavy sy fito lahy